Banyere Anyị - Xuzhou VYT Machinery Technology CO., Ltd.
Xuzhou VYT Machinery and Technology Co., Ltd. na-arụpụta igwe maka mmepụta nke FIBC ruo ọtụtụ afọ, Ọ bụghị naanị maka igwe, na-esonye na ụlọ ọrụ ahụ ma na-enyekwa ọrụ ọkachamara ọkachamara gụnyere azịza teknụzụ, ụdị nhọrọ, nyocha teknụzụ na teknụzụ nweta nkwalite. Taa, ọtụtụ ndị ahịa na ihe karịrị mba 30 niile Wold nwere afọ ojuju maka ogo na ntụkwasị obi nke ngwaahịa na ọrụ anyị. N'etiti ha a ụwa na-eduga emeputa nke FIBC (nnukwu akpa, akpa akpa, jumbo akpa) ịcha igwe, ultrasonic cutter na akpaka bagging usoro. Anyị na-iji ịzụlite na Nlụpụta niile FIBC metụtara igwe, kpọmkwem haziri na engineered maka FIBC inyeaka na n'azụ gụchara akụrụngwa.
Taa, ọtụtụ ndị ahịa n'ụwa nile, nwere afọ ojuju maka ogo na ntụkwasị obi nye ọrụ na ngwaahịa anyị. Dabere na ahụmịhe anyị nwere ogologo oge na etu esi arụ ọrụ, anyị na-enye ndị ahịa anyị teknụzụ maka ịmalite ma ọ bụ ịgbasawanye usoro mmepụta ha iji mezuo atụmanya ahịa yana ntụgharị na ọrụ mmemme .Obumnuche anyị bụ ịkwalite ọrụ anyị na ngwaahịa anyị mejuo ndi ahia anyi site na isoro teknụzụ ohuru na mkpa ahia.
Na ike oru nkwado, elu nhazi akụrụngwa, zuru okè na nkà mmụta sayensị management, na ndabere nke na-aga n'ihu iwebata na absorption nke mba ọzọ elu technology, jikọtara na anyị ụlọ ọrụ ọtụtụ afọ nke n'ibu n'ichepụta ahụmahụ, anyị mepụtara mmepụta ngwá nke mgbanwe akpa akpa plastic kpara ngwaahịa . Anyị ịmụta a ọhụrụ nnyefe mode, nke nwere ike bee cylinder ákwà na otu oyi akwa akwa. Agaghi eji ya maka na akwa di nro ma obu diri na mma. Ọ nwere ike belata ọnụahịa mmepụta ma melite elele gị. Na ndabere nke n'ibu n'ichepụta, anyị ịzụlite anyị usoro nke plastic kpara ngwaahịa.
Anyị na-aghọ ihe kpọrọ ihe Jumbo akpa igwe ngwọta ụlọ ọrụ na onwe ha R & D ikike, elu àgwà ngwaahịa na adịchaghị ọrụ. Anyị nwere ike na-enye dum ngwọta maka nile di iche iche, nke FIBC Ndinam. Anyị n'anabata ọrụ igwe ndị eji ahaziri nkeonwe, ka anyị meziwanye onwe anyị ma mụta ihe, ga akwalite teknụzụ anyị karịa ma tozuru etozu. "Ndị Ahịa Ọrụ, Na-emepe Ọnụ" bụ ụkpụrụ gbanyere mkpọrọgwụ n'obi mmadụ niile. Site na ụkpụrụ nke ụkpụrụ ahụ, ndị ahịa ụlọ na mba ụwa na-enweta mmata sara mbara.
Anyị bụ ndị ọkachamara banyere Ultrasonic ịcha igwe, jumbo akpa Ndinam igwe na na. Anyị na-ebupụ ngwaahịa anyị gaa na mba 50 na mpaghara dịka Middle East, Russia, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Africa. Ngwaahịa na ọrụ anyị nwere ezigbo aha n'ụwa niile.Anyị na-agbasawanye ndị ahịa anyị. N'ọdịnihu, anyị ga-ehiwe ngalaba ebe a na Vietnam na Nigeria, anyị nwere ike ịme nke ọma na nke ka mma n'ime ụlọ ọrụ na-eme igwe jumbo.
Site na mgbalị na-agbanwe agbanwe, anyị nwere teknụzụ dị elu, akụrụngwa magburu onwe ya, teknụzụ dị elu yana usoro mmesi obi ike. N'otu oge ahụ, anyị bụ ụlọ ọrụ ihe ngwọta igwe jumbo a na-asọpụrụ nke nwere ikike R&D nwere onwe ya, ngwaahịa dị elu na ọrụ adịchaghị.
Na-aga n'ihu mma, anyị na e-ewepụta onwe anyị na-ígwè ọrụ ụlọ ọrụ. Site na ihe omuma anyi bara uba anyi na eme ka igwe anyi rue ulo oru kwesiri ekwesi. Ihe ọ bụla ọhụrụ anyị na-emepụta anyị na-anwale igwe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị, mgbe anyị nyochachara afọ ojuju anyị na-ewebata n'ahịa.
Independent nnyocha na mmepe ike, elu-edu ngwaahịa na àgwà ọrụ.
Igwe VYT na-enye ndị ahịa ya ọrụ, maka azịza ahịa ka mma.
Anyị onwe anyị factory nditịm akara ọ bụla nzọụkwụ nke mmepụta, mma akara mma na nnyefe oge.
VYT ika bụ ezigbo onye ọlụlụ maka ọtụtụ ndị nrụpụta, ndị ọrụ injinia na ndị na-eweta ngwa ọrụ.
"Top mma, ezi uche ahịa & bukwanu mgbe-sales ọrụ" bụ anyị ụkpụrụ, "Ahịa 'afọ ojuju" bụ anyị ebighi ebi mgbaru ọsọ; anyị na ngwaahịa na-ọma nabatara bụghị naanị na anụ ụlọ ahịa kamakwa na ọtụtụ oversea ahịa gburugburu ụwa.
A na-eto eto na ike enterprise, ụlọ ọrụ mkpara raara nye enye-klas na ngwaahịa maka obodo ọtụtụ ndị enyi, mbụ na klas service.We kwere VYT ga-aka mma na mma, ahịa ina bụ anyị na-adịghị agwụcha engine ka mma, ahịa nkwado na nkwenye bụ mmanụ anyị ka ọ ka mma!